Dhamma Video - Browse Media - D - Dhamma - á€“á€™á�¼
D - Dhamma - ဓမ္မ - Most Recent
Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] PAKOKU SAYADAW 28/03/2010
Posted By: Thanmaungoo
Tags: 28/03/2010 Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] PAKOKU SAYADAW 27/03/2010
Tags: 27/03/2010 Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] PAKOKU SAYADAW 26/03/2010
Tags: 26/03/2010 D - Dhamma - ဓမ္မ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဗုဒ္ဓံ...
ရတနာသုံးပါး မမေ့ကြလေနှင့်။ [ဗုဒ္ဓံ ဓမ္မံ သံဃံ]
Tags: ရတနာသုံးပါး မမေ့ကြလေနှင့်။ [ဗုဒ္ဓံ ဓမ္မံ သံဃံ] D - Dhamma - ဓမ္မ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] 969 (၉၆၉)
Tags: 969 (၉၆၉) Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] PAKOKU SAYADAW 25/03/2010
Tags: 25/03/2010 D - Dhamma - ဓမ္မ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အက်(စ်)ဂွန�...
အက်(စ်)ဂွန်အောင် (ခ) ကိုကိုလွင် (ခ) ဘဒ္ဒန္တ သုမနာလင်္ကာရ (ခ) Rev.T.Peter / S-Gun Aung (Professor) ၏ ကမ္ဘာကျော်သည့် လိမ်လည်စော်ကားမှု...
Tags: အက်(စ်)ဂွန်အောင် (ခ) ကိုကိုလွင် (ခ) ဘဒ္ဒန္တ သုမနာလင်္ကာရ (ခ) Rev.T.Peter / S-Gun Aung (Professor) ၏ ကမ္ဘာကျော်သည့် လိမ်လည်စော်ကားမှု ဖော်ထုတ်ခြင်းမှတ်တမ်း D - Dhamma - ဓမ္မ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] သဒ္ဓမ္မပါလေ...
Tags: သဒ္ဓမ္မပါလကျောင်းတိုက် ကထိန်အလှူပွဲ နှင့်ဆွမ်းလောင်းမှတ်တမ်း Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] PAKOKU SAYADAW 24/03/2010
Tags: 24/03/2010 D - Dhamma - ဓမ္မ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဝဋ်မှာအမြ...
ရွှေညဝါဆရာတော် - ဝဋ်မှာအမြဲ၊ ငရဲမှာအပ တရားတော်
Tags: ဝဋ်မှာအမြဲ၊ ငရဲမှာအပ တရားတော် - ရွှေညဝါဆရာတော် Pages: 1234567 of 14